Kobocashada qajaarka ee dhulka furan | January 2020
Waxa aad u baahan tahay iyo sida loo xalliyo khamriga guriga
Editor Ee Doorashada January 19,2020
Ugu Weyn Ee Kobocashada qajaarka ee dhulka furan
Cucumber: habka saxda ah ee sii kordhaya
Xitaa beerta ugu khibrad badan, oo ku beeray dalagyada kala duwan ee uu ku sawirnaa muddo ka badan hal sano, kuma dhici karto in ay ka baxaan laba sariirood oo qajaarka ah. Waxay horey u noqotay dhaqanka - xagaaga waxaan koraan dalagga, soo ururi midhaha, u rogaa bangiyada, iyo xilliga jiilaalka waxaan ku raaxaysan karnaa alaabta qasacadaysan. Dadka qaarkood waxay u maleynayaan in ay lagama maarmaan tahay in lagu beero wax khudaar ah oo dhulka hoostiisa ah, sida haddii uu qaabkeeda asalka ah, iyo tanina waa habka kaliya ee lagu helo midhaha ugu faa'iido badan uguna dhadhan fiican leh.
Dhammaan wixii ku saabsan quudinta qajaarka ka dib beerashada dhulka, ka badan bacrimiya dhirta
Cucumber waa mid ka mid ah khudradda ugu badan ee la dalbaday, baabba'day cusub ama qasacadaysan. Kalluumeysiga la kariyay iyo pickles - hudheelkii ugu horeeyay ee miisaska. Si ay u koraan qajaarka, waa inaad isku daydaa oo aad siisaa khudradda dhammaan waxyaabaha muhiimka u ah goosashada wanaagsan. Qeyb ka mid ah aragti: shuruucda aasaasiga ah ee quudinta qajaarka Cucumber waxaa loo tixgeliyaa dalagga beeraha ugu caamsan.
Marka beeritaanka qajaarka ee dhulka u furan, talooyinka bannaanka
Dhiroonka qajaarka wuxuu ku beeri jiray ku dhowaad dhammaan deegaan xagaaga. Si kastaba ha noqotee, cid kastaa way ogyihiin goorta iyo sida loo beeray si habboon si ay u helaan goosashada ugu fiican. Qajaarku waa khudradda dusha sare leh oo soo saarta dhowr shuruudood oo beereed iyo daryeel. Iyada oo taariikhaha la abuuro iyo fiiro gaar ah, dhirta waxay kori kartaa oo si fiican u miro dhalin kartaa labada koriyo iyo hawada furan.
Waraabinta habboon ee khajaarka ee berrinka bannaan
Kobcinta qajaarka ee berrinka bannaan, waa arrin aad muhiim u ah in la waafajiyo dhammaan shuruudaha geeddi-socodkan iyo hubinta daryeel habboon. Muhiimad gaar ah waa saxnimada waraabinta. Maqaalka waxaan ku sharxi doonaa sida qajaarka biyaha berrinka u furan si loo helo hodan, tayo sare leh. Xaaladaha qajaarka sii kordhaya Ka hor intaanad bilaabin koritaanka dalagga, waa muhiim inaad barato shuruudaha muhiimka u ah koritaanka caadiga ah ee khudradda.
Gogol duck: sawir iyo sharaxaad
Waxyaabaha ku jira boodhadhka guriga
Tilmaanta iyo kobcinta yaanyo "Golden Stream" ee dhulka u furan
Ilmaha oo difaac adag leh - noocyo yaanyo ah "Titan Pink": sifooyinka iyo dabeecadaha waaweyn
Nooca guriga ee daaqada ubaxyada - Abelia weyn oo ubax leh
Daaweynta Canbaarta ee dayrta
Maanta, dhirro badan ayaa loo isticmaalaa daawada dhaqanka si looga hortago cuduro kala duwan. Maqaalkeena waxaan kuu sheegi doonaa waxa Doodwaduhu yahay, noocyada dhirta iyo sida loo koro oo loo isticmaalo si habboon si loo daaweeyo cudurada. Qeexitaanka Botanical Korovyak waa warshad bangi ah oo biennial ah oo leh stem erig ah, dhererkiisu gaaro 150 cm. Read More
Waa maxay germanyum budo ah ee ubax iyo sida loo sameeyo si sax ah? Xeerarka aasaasiga ah ee sameynta baadiyaha
Diyaarinta ciidda for geedo sii kordhaya ee yaanyada
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Kobocashada qajaarka ee dhulka furan 2020